Chiang Mai Doi Inthanon Trip | NU MYAT AROUND THE WORLD
Posted on May 24, 2017 by Nu Myat
ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ဆွစ်ဇာလန်လေး @ ချင်းမိုင်ရောက်နေ့ရက်များ
ထိုင်းဆိုရင် မြို့ပြဆန်တဲ့ ဘန်ကောက်၊ ဘန်ကောက်ကနေ နေ့ချင်းပြန်သွားလို့ရတဲ့ ပတ္တရား၊ အယုဒ္ဓယ၊ ဖူးခက်ကမ်းခြေစတာတွေပဲ သွားလေ့ရှိပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ မြန်မာခရီးသွားတွေ သွားလာကြတာကတော မြောက်ပိုင်းက တောင်ပေါ်မြို့လေး ချင်းမိုင်ပါ။ ချင်းမိုင်က ရာသီဥတုသာယာသလို ပန်းပေါင်းစုံဖူးပွင့်သာယာလို့ အပူပိုင်းဒေသကလာတဲ့ နုမြတ်တို့အကြိုက်ပေါ့။ ရှမ်းပြည်နဲ့ ကပ်ရပ်မှာ ရှိပြီး မြန်မာတွေက ဇင်းမယ်လို့လည်း သိထားကြပါတယ်။ တချိန်က မြန်မာတွေ လက်အောက်ရောက်ခဲ့ဖူးပြီး မြန်မာပြည်နဲ့ အနီးအနားမှာ ရှိလို့ မြန်မာအငွေ့အသက်တွေ များစွာရှိလို့နေပါတယ်။
ချင်း မိုင်မှာက တန်ခိုးကြီး ရှေးဟောင်းဘုရားစေတီတွေရှိသလို၊ လည်ပတ်စရာတွေ၊ Adventure လုပ်စရာတွေလည်း ရှိလို့နေပါတယ်။ ချင်းမိုင်ကို ဒီဇင်ဘာလတုန်းက ၄ညအိပ်၅ရက်ခရီးထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ပုံမှန်ဆို ၂ညအိပ် ၃ရက်နဲ့ လောက်ပေမဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ အမြင့်ဆုံးတောင် Doi Inthanon ဘက်ပါ ခရီးဆက်မှာ ဖြစ်လို့ နောက်ထပ် ၂ရက်ဆက်နေတာပါ။ မြန်မာနဲ့ နယ်စပ်မြို့ ချင်းရိုင်နဲ့ မြန်မာ၊ ထိုင်း၊ လာအို သုံးနိုင်ငံ ထိစပ်နေတဲ့ ရွှေတြိဂံနယ်မြေတွေဆိ သွားမယ်ဆိုရင်လည်း နောက်ထပ် ၂ရက် ထပ်နေမှ ရမှာပါ။ ချင်းမိုင်ကို ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ် သွားလိုသူတွေ အတွက် ကျွန်မတို့ရဲ့ ခရီးစဉ် အကြမ်းဖျဉ်းလေးကို ရေးသား ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Day 1 ရန်ကုန်-ချင်းမိုင်- Night Safari
ရန်ကုန်ကနေ ချင်းမိုင်ကို တိုက်ရိုက်လေကြောင်းလိုင်းတွေ ရှိနေလို့ ဘန်ကောက်ကနေ တဆင့်သွားစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ နုမြတ်တို့ကတော့ Bangkok Airways နဲ့သွားပါတယ်။ Bkk Airways ထွက်တဲ့ အချိန်ရယ်၊ အစားအသောက်ရယ်၊ Service ရယ် ကြိုက်လို့ သွားဖြစ်တာပါ။ နေ့လည် ၁း၄၀ ထွက်ပြီး ချင်းမိုင်ကို ထိုင်းအချိန် ၃း၄၀ pmမှာရောက်ပါတယ်။ ချင်းမိုင်မှာ ကြိုစီစဉ်ထားတဲ့ Tour Guide ရယ်၊ ၈ယောက်ဆန့်တဲ့ Van Car ရယ် အသင့်လာကြိုနေပါတယ်။
ချင်းမိုင်မှာက Taxi တွေ ရှားတော့ လူများရင် ကား ဌားထားမှ အဆင်ပြေမှာပါ။ ကားက van ကားဆို တစ်နေ့ကို ၁၈၀၀-၂၀၀၀ ဘတ်ကျပါတယ်။ ဓာတ်ဆီမပါဘဲ Driver ပါအပြီးပေါ့။ ရက်များရင် လျော့ပေးပါတယ်။ Tour Guide ကတော့ သိပ်မလိုပါဘူး။ ခေါ်ချင်ရင်တော့ တစ်ရက်ကို ဘတ်၁၅၀၀ ကနေ ၃၀၀၀ ထိ ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုပေါ်မူတည်ပြီး အစားစားရှိပါတယ်။
Taxi ဆိုရင်တော့ လေဆိပ်ကနေ မြို့ထဲ နေရာပေါ်မူတည်ပြီး ဘတ် ၁၅၀ ကနေ ၃၀၀ပါ။ Shuttle Bus လည်းရှိပြီး တစ်ယောက်ကို ဘတ်၆၀လောက်ကျမှာပါ။
လေယာဉ်ကွင်းကနေ အရင်ဆုံး Hotel မှာ Check in ၀င်ပါတယ်။ Hotel ကတော့ မြစ်ဘေးကပ်ရပ် Maraya Resort ပါ။
ကျယ်ဝန်းလှတဲ့ အခန်းကြီးရယ် အခန်းကနေလှမ်းမြင်ရတဲ့ မြစ်နဲ့ တစ်ဖက်ကမ်းက ဘုရားနဲ့ အတော်လေးကို သာယာပါတယ်။ ဒီ Resortလေး က အခန်းဖွဲ့စည်းပုံရယ်၊ မနက်စာစားတဲ့နေရာလေးကိုလည်း သိပ်သဘောကျပါတယ်။
၀င်ကြေး- လူကြီး ဘတ်၈၀၀၊ ကလေး ဘတ် ၄၀၀
Hotel မှာ ပစ္စည်းချပြီးတာနဲ့ Night Safari ကို တန်းသွားကြပါတယ်။ Night Safari က ချင်းမိုင်ရဲ့ အဓိက Attraction ထဲမှာပါပြီး ရှားပါးတိရစ္ဆာန်လေးတွေကို တစုတစည်းထဲ ပြထားတဲ့ နေရာလေးပါ။ တိရစ္ဆာန်တွေကို သဘာဝအတိုင်း အမှောင်ချထားတဲ့ တောကြီး မျက်မည်းထဲ ဘေးနှစ်ဖက်ပွင့်ကားကြီးတွေနဲ့ သွားရတာ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာပါ။ Night Safari မှာ အရိုင်းနဲ့ အယဉ် ၂ပိုင်းခွဲထားပြီး ည ၇နာရီကနေ ၁၀နာရီကြား ၁၅မိနစ်တစ်ကြိမ် ကားထွက်တာကြောင့် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ဘက် အရင်သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ကြောင်းကို တစ်နာရီလောက် ကြာနိုင်ပါတယ်။
Night Safari မှာ တိရစ္ဆာန်ပေါင်း ကျော်ရှိပြီး တချို့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေကိုတော့ ကားတွေနားမလာနိုင်အောင် လျှိုမြောင်တွေ ချိုင့်ဝှမ်းတွေ ခံပေးထားပြီး အကာအကွယ်တွေ ထားပေးထားပါတယ်။ ဒရယ်တို့၊ သစ်ကုလားအုတ်တို့၊ သားပိုက်ကောင်တို့၊ မြင်းကျားတို့ကတော့ ကားတွေနားထိရောက်လာပြီး အစာတောင်းလို့ ပြောစရာကြီးပါ။
ဒါ့အပြင် ဖြူကောင်တွေ၊ ကျားပေါက်လေးတွေ၊ သာလိကာလေးတွေ၊ ဇီးကွက် မျက်ပြူးကြီးတွေနဲ့ လည်း ဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်ပါသေးတယ်။ Show အနေနဲ့ကတော့ ည၇နာရီမှာ White Tiger Show (ကျားဖြူပြပွဲ)နဲ့ ည၈နာရီနဲ့ ၉နာရီတို့မှာ Musical Fountain Water Screen Laser Light Show လေဆာရေပန်းဂီတပြပွဲ ကြည့်လို့ရပါတယ်။
ဒီနေ့ကတော့ စောစောစီးစီး ဘုရားသွားတဲ့နေ့ပါ။ Doi Suthep တောင်ပေါ်က Wat Prathet စေတီကို မနက်စာစားပြီးတာနဲ့ သွားပါတယ်။ ချင်းမိုင်ကနေ ၁နာရီကြာမောင်းရပြီး တောင်တက်ကားလမ်းအတိုင်း တောင်ပေါ်ကို ဆက်တက်ရပါတယ်။ ဘုရားမုခ်ဦးကနေ ရင်ပြင်ပေါ်ကို လှေကားထစ် ၂၀၀ရှိ နာမည်ကြီးလှေကားနဲ့ တက်နိုင်သလို ကြိုးဆွဲ ရထားနဲ့ တက်နိုင်ပါတယ်။ ဓာတ်လှေကားကို ဒေါင်လိုက်မဟုတ်ဘဲ ၄၅ဒီဂရီလောက် ခပ်စောင်းစောင်းတက်ရတာမျိုးပါ။ တစ်ယောက်ကို ဘတ် 20 ပေးရပါတယ်။
Wat Prathet (ပရာသတ်စေတီ) က မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ပုခုံးရိုးတော် ဌာပနာထားတဲ့ စေတိ ဖြစ်ပြီး ထိုင်းရဲ့ တန်ခိုးကြီး ရှေးဟောင်းစေတီတော်ဖြစ်ပါတယ်။ တောင်ပေါ်က နေ ချင်းမိုင်မြို့အလှကိုလည်း လှမ်းမြင်နိုင်ပါတယ်။ နုမြတ်တို့ရောက်တုန်းက မိုးဖွဲကျ မြူတွေဆိုင်းနေလို့ မမြင်ခဲ့ရပါဘူး။ စေတီ ရင်ပြင်တော်မှာ စကျင်ကျောက်ဘုရား၊ မြဘုရား၊ သလင်းဘုရားစတဲ့ ကျောက်ပေါင်းစုံနဲ့ ထုစစ်ထားတဲ့ ဆင်းတုတွေ တွေ့ခဲ့သလို၊ စေတိကို လက်ဝဲရစ် သုံးပတ်ပတ်ကာ ဘုရားစာ ရွတ်ဖတ်ပူဇော်နေသူတွေလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဘုရားမှာ ကိုယ့်နာမည်ထိုးကာ ခေါင်းလောင်းလည်း လှူနိုင်ပါတယ်။ ခေါင်းလောင်းတစ်လုံးကို ဘတ် ၃၀ (ကျပ်၁ထောင်ကျော်) ပါ။
ဒီ LIVE video link ထဲမှာ ဘုရားဖူးနိုင်သလို ဘုရားသမိုင်းကို သေချာ အသေးစိတ်ရှင်းပြထားပါတယ်။
နေ့လည်စာကို ချင်းမိုင်စာတွေရောင်းချတဲ့ ဒေသဆိုင်မှာ တ၀တပြဲစားပြီးနောက် ဈေးဝယ်ထွက်ကြပါတယ်။ Warorot Market နဲ့ To Lam Yai Market လို့ခေါ်တဲ့ ချင်းမိုင်ဈေးတွေပါ။ ဒေသခံတွေရဲ့ ဈေးဖြစ်တဲ့ အလျောက် local products တွေ စားသောက်ကုန်တွေပေါပါတယ်။ Tourist တွေလည်းလာလို့ အမှတ်တရ ပစ္စည်း အရောင်းဆိုင်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ ကိုယ်တွေကတော့ ကလေးကျောပိုးထားတဲ့ ချင်းမိုင်ရိုးရာ အရုပ်လေးရယ်၊ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်အစုံ အစာသွပ်ထားတဲ့ ချင်းမိုင် ၀က်အူချောင်းကြော်စပ်စပ်လေးရယ် အိမ်အပြန်လက်ဆောင် ၀ယ်သွားပါတယ်။
အဲ့ဈေးတွေကနေ တစ်ဖက်ကမ်းကို တံတားနဲ့ ကူးတဲ့ အခါမှာ Wat Ket ရပ်ကွက်လို့ခေါ်တဲ့နေရာရောက်ပါတယ်။ အဲ့မှာ ရှေးနှစ်ပေါင်း ၅၀၀ကျော် ၆၀၀လောက်က မြန်မာတွေ တည်ထားခဲ့တဲ့ Wat Ket ဘုရားနဲ့ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေပြသထားရာ ပြတိုက်တစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲ့မှာ မြန်မာ ပိုက်ဆံတွေရော မြန်မာရှေးဟောင်း ကြိုးကြီးချိတ်ထမီတွေ၊ မြန်မာရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေပါ ပြသထားတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
တစ်နေကုန်ပင်ပန်းထားကြတော့ ချင်းမိုင်ရဲ့ နာမည်ကြီး Luxury Spa ဖြစ်တဲ့ Oasis Spa ကို ရောက်သွားကြပါတယ်။ ချင်းမိုင်မှာ Spa တွေ massage တွေ နာမည်ကြီးပြီး ဆိုင်တွေ များစွာ ရှိတဲ့ထဲက တကယ့်ထိပ်တန်းဆိုင်လို့ သိရပါတယ်။ King of Oasis နာမည်ရှိတဲ့ Treatment ကို ယူဖြစ်ပါတယ်။ ဘတ် 4000 ကျော်ကျပါတယ်။ ထိုင်းရိုးရာ အပူပေးပြီး ဆေးစိမ်ထားတဲ့ ကြပ်ပူနဲ့ ကိုယ်အနှံ့လိုက်ထိုးပေးတာ အတော့်ကိုကောင်းပါတယ်။ စပါးလင်အနံ့လေးသင်းနေတဲ့ အဆီနဲ့ တကိုယ်လုံးကို လိမ်းပြီး နှိပ်နယ်ပေးတော့ အကြောအချဉ်တွေ တကယ်ပြေသွားပါတယ်။ ၂နာရီကြာတဲ့ Treatment အပြီးမှာ တကိုယ်လုံးပေါ့ပါးပြီး ညဈေးတွေ ပတ်ဖို့ အသင့်ဖြစ်နေကြပြီပေါ့။
ညဈေးမပတ်ခင် Oasis Spa နားက Wat Pra Singha ဘုရားကျောင်းမှာလည်း ဘုရားဝင်ဖူးခဲ့ပါသေးတယ်။
ချင်းမိုင်မှာ ညဈေးအများကြီးရှိပါတယ်။ ရှေးဟောင်းမြို့ဖြစ်တဲ့ ချင်းမိုင်မှာ မြို့ရိုးတွေလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။ မြို့လေးဘက်မှာ ဂိတ်လေးခုရှိတဲ့အနက် Chiang Mai Gate နဲ့Chang Puak North Gate တို့မှာ Night Market တွေ ညတိုင်းရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Weekends တွေမှာ Saturday Walking Street? Sunday Walking Street ဆိုပြီးတော့လည်း ရှိပါသေးတယ်။ Night Bazzar တွေ Night Plaza တွေနဲ့ ညဘက်လည်ပတ်စရာတွေ အများကြီးပါ။
ဒိနေ့ကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ အမြင့်ဆုံးတောင် Doi Inthanon ကို တက်မှာမို့လို့ ချင်းမိုင် ဟိုတယ်ကနေ မနက်ကတည်းက Check Out လုပ်ရပါတယ်။
တော်ဝင်ပန်းခြံဟာလည်း ပန်းမြို့တော် ချင်းမိုင်မှာ သွားသင့်တဲ့နေရာလေးပါ။ ပန်းပေါင်းမျိုးစုံရှိတဲ့ပန်းခင်းတွေ၊ သစ်ခွခြံတွေ၊ထင်းရူးတောတွေရှိသလို ပန်းခြံအလည်မှာ နတ်ရွာစံသွားတဲ့ ဘုရင်ကြီးကို ရည်စူးဆောက်လုပ်ထားတဲ့ ပြသာဒ်ဆောင်ကြီးလည်း ခမ်းနားစွာ ရှိလို့နေပါတယ်။ ချင်းမိုင်ရိုးရာအိမ်တွေ၊ Culture တွေနဲ့ တခြားလေ့လာစရာ ဓာတ်ပုံရိုက်စရာနေရာတွေလည်း ရှိလို့ အနည်းဆုံး ၁နာရီလောက်တော့ကြာမယ်နော်။ ပန်းခြံကို ပတ်နေတဲ့ ကားလည်း ရှိပြီး အဲ့ကားနဲ့ လိုက်စီးကာ ကိုယ်လေ့လာချင်တဲ့နေရာမှာ ဆင်းလေ့လာရုံဆိုတော့ အတော်အဆင်ပြေပါတယ်။
ဆင်စခန်းတွေကလည်း ချင်းမိုင်မှာ များမှများပါ။ နုမြတ်တို့ကတော့ ဆင်စခန်းတစ်ခုကိုခဏ၀င်လေ့လာခဲ့တယ်။ ဆင်ပေါက်လေးတွေလည်းတွေ့ရပြီး ဆင်လေးတွေက လူတွေယဉ်နေတယ်။ ဆင်အနမ်းတောင်ခံလိုက်ရသေးတယ်။ ဆင်စခန်းမှာရိုက်ထားတဲ့ LIVE video နဲ့ ဆင်နမ်းနေတဲ့ Video file လေးကို ဒီLink တွေမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဆင်စီးချင်လည်း စီးလို့ရတယ်။ https://www.facebook.com/numyat/videos/10154260539593412/
တောင်အသွားလမ်းမှာ ဘုရားဝင်ဖူးပြီး ချည်ထည်တွေဗိုင်းငင် ရက္ကန်းရက်တဲ့ ရက္ကန်းရုံကိုလည်း ၀င်ရောက်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ အင်သာနုံဘုရင်ပိုင်ခဲ့တဲ့ ပျဉ်ထောင်အိမ်ကြီးကို အိမ်ပေါ်မှာပြတိုက် အိမ်အောက်မှာ ရက္ကန်းရုံအဖြစ်ရက်လုပ်နေဆဲပါ။
တောင်ပေါ်က ဟိုတယ်လေးက တော့ Touch Star Resort ပါ။ ဘန်ဂလိုလေးတွေနဲ့ ချစ်စရာ ဟိုတယ်လေးပါ။ ၀က်ရုပ်လေးတွေနဲ့ အလှဆင်ထားတာ အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဟိုတယ်ကို ညနေ ၄နာရီလောက်ကတည်းက ရောက်နေပေမဲ့ နောက်နေ့မနက် ၄နာရီ ထရမှာကြောင့်ရော ခရီးပန်းနေပြီမို့လို့ရော ဘယ်မှ မသွားတော့ပဲ ဟိုတယ်မှာပဲ ညစာစားပြီး နောက်နေ့အတွက်အားမွေးခဲ့ကြပါတယ်။
၀င်ကြေး – Tourist ဘတ် 300. Local ဘတ် 100
ဒီတောင်ကို ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ မျက်နှာကျက်လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။ အမြင့်ပေ ၈၀၀၀ကျော်မှာရှိပြီး ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ အမြင့်ဆုံးတောင်မို့လို့ပါ။ ရှမ်းရိုးမတောင်တန်းတွေနဲ့ တဆက်တည်းရှိပြီး မြန်မာတောင်တန်းတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ အရမ်းမြင့်တယ်လို့ မဆိုသာပါဘူး။ ဒီတောင်ပေါ်က မြင်ရတဲ့ နေထွက်ချိန်ရှုခင်းကတော့ စာဖွဲ့လို့ မရလောက်ပါဘူး။ မနက် ၅နာရီကတည်းက ဟိုတယ်ကနေထွက်ကာ တောင်ပေါ်ကို ကားနဲ့ တက်ခဲ့ကြပါတယ်။ နေထွက်ချိန်ကြည့်တဲံနေရာက တောင်ထိပ်မှာ မဟုတ်ဘဲ တောင်တက်လမ်းတစ်နေရာမှာပါ။ ကားလမ်းဘေး ကားရပ်ထားကြပြီး ကားလမ်းဘေးတစ်ဖက်ကနေ နေထွက်ချိန်ကို လာကြည့်ကြတာပါ။ မနက်စောစာစီးစီး ရာသီဥတုကလည်းအေးတော့ ဘယ်သူမှ မရှိလောက်ဘူး မထင်ပါနဲ့။ ကြိတ်ကြိတ်တိုးကြည့်ရတာပါ။ တစ်နေရာရအောင် မနည်းတိုးခဲ့ရတာပါ။
တိုး၇တာနဲ့တော့တန်ပါတယ်. နေထွက်လာတာတော်တော်လေးကို လှတယ်ရော… ရောင်နီလင်းလာတဲ့ ပုစါန်ဆီရောင်ကောင်းကင်ရှေ့မှာ တိမ်ဖြူဖြူတွေ အလိပ်လိုက် အလိပ်လိုက်ရှိနြေ့ပီး အဲ့တိမ်တွေထဲက အနီရဲရဲ နေလုံးပေါက်စလေးက အောက်ကနေအပေါ်ကို တရွေ့ရွေ့ ထိုးဖောက်ထွက်လာတာ အရမ်းကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်။
တောင်ရဲ့အမြင့်ဆုံးနေရာမှာ တောလျှောက်လမ်းလုပ်ထားပြီး အမှတ်အသားဆိုင်းဘုတ်လည်းထားရှိပါတယ်။ အင်သာနုံပြည်နယ် ဘုရင်ရဲ့ အုတ်ဂူလည်းရှိလို့နေပါတယ်။ တောင်ထိပ်နားက သဘာဝတောလျှောက်လမ်းလေးမှာလည်း လျှောက်သင့်ပါတယ်။ တကယ်ကို တောထဲ ရောက်နေသလို နေပြောက်လေးတွေကလည်း တချက်တချက်ထိုးနေပြီး အေးချမ်းလျပါတယ်။ နာရီဝက်လောက်ပဲကြာမှာပါါ။ အဲ့မှာ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ အသက်သွေးကြော ကျောက်ဖရားမြစ် မြစ်ဖျားခံရာ စမ်းချောင်းလေးလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
တောင်ထိပ် နေထွက်ချိန်ရှုခင်း၊ သဘာဝတောလျှောက်လမ်းလေး Video ကတော့ ဒီမှာပါ။
နေထွက်ချိန်ကြည့်တဲ့နေရာနားမှာ နတ်ရွာစံသွားတဲ့ ဘုရင် သက်တော် ၆၀ပြည့်က ဘုရင်ကြီးနဲ့ မိဖုရားကြီးကို ရည်စူးပြီးတည်ထားတဲ့ စေတီ၂ဆူကပ်လျှက်ရှိပါတယ်။ ဒီစေတီတွေပေါ်က မြင်ရတဲ့ တိမ်တွေတောင်တွေရှုခင်းက လှပလွန်းလို့ သွားသင့်ပါတယ်။ တိမ်ပင်လယ်ကြီးတွေကိုယ့်အောက်မှာ ရောက်နေသလို ခံစားရတဲ့ ရှုခင်းပါ။ တောင်ပေါ်ဘုရားပေါ်က Live Video ကတော့ ဒီမှာပါ။
နောက်ပြီး တောင်ပေါ်မှာ Royal Project လို့ခေါ်တဲ့ ပန်းခြံတွေ၊ Organic စိုက်ခင်းတွေ၊ Resort တွေလည်းရှိပါတယ်။ ရေတံခွန်တွေလည်းရှိပြီး Wachiratan Waterfallကတော့ သွားရလွယ်ပြီး လှပကြီးမားတဲ့ ရေတံခွန်ကြီးပါ။ ရေတံခွန်ကြီးရဲ့ LIVE video က ဒီမှာပါ
ဒီနေ့လည်း ဟိုတယ်ကို စောစော ပြန်ရောက်ပါတယ်။ ညနေ၄နာရီလောက်ပါ။ တောင်ပေါ်မှာ ဘာမှ လုပ်စရာမရှိလို့ စောစောစီင်္းစီးအနားယူကာ အိပ်ခဲ့ရပါတယ်။
ဒီနေ့ကတော့ရန်ကုန်ပြန်တဲ့နေ့ပါ။ တောင်ပေါ်ကနေ လေဆိပ်ကို တစ်ခါတည်းတန်းဆင်းပါတယ်။
နုမြတ် ချင်းမိုင်ကိုရောက်တာ ဒါ ဒုတိယမြောက်ပါ။ ပထမတစ်ကြီမ်တုန်းက ချင်းမိုင်ရိုးရာ အကအလှတွေနဲ့ ဖျော်ဖြေတဲ့ Khum Khan Toke စားသောက်ဆိုင်ကို ရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့နေရာလည်း ချင်းမိုင်သွားတဲ့ သူတွေ မရောက်မဖြစ်နေရာပါပဲ။ ဟင်းပွဲတွေကို ဆွမ်းတော်အုပ်နဲ့ ချကျွေးတာပါ။
ငလျင်ဒဏ်ကြောင့် တ၀က်ပြိုကျသွားတဲ့ ထုထည်ကြီးမားတဲ့ Wat Chedi Luang ကိုလည်း သွားရောက်ဖူးမြော်သင့်ပါတယ်။
အထူးအဆန်းတွေ စိတ်ဝင်စားရင် World Insects Museum သွားကြည့်ပါ။
အပျော်ဓ်ာပုံရိုက်ချင်ရင်တော့ 3D Art Museum ကို သွားပါ။
Adventure စိတ်ဝင်စားရင် တောတါင်းသားတာဇံလို သစ်ပင်တစ်ပင်နဲ့ တစ်ပင်ကြိုးနြ့ ကူးရတဲ့ Zipline Adventure တို့ Flight of Gaboon ဆိုတာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။
ဂေါက်ရိုက်ဝါသနာ ပါသူတွေအတွက် သာယာလှပတဲ့ ဂေါက်ကွင်းတွေလည်း အများကြီးပါ။
Night Safari မှာ အစာကျွေးတဲ့ အခါ Zebra ကို သတိထားပါ။ သွားတွေက ချွန်ထက်နေတာကြောင့် လက်နဲ့ ကျွေးလို့ ကိုက်မိရင် လက်ပြတ်သွားနိုင်ပါတယ်။
Walking Street က တော်တော့်ကို ရှည်ပါတယ်။ ကိုယ်ကြိုက်တာလေးတွေ တွေ့ရင် ၀ယ်ထားလိုက်ပါ။ နောက်ပြန်လှည့်ဝယ်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်လို့ပါ။ ပေါပေါလောလောတွေ့ရတဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေကို တော့ Walking Sreet ထိပ်နားမှာ မ၀ယ်ပါနဲ့။ ဈေးပိုကြီးလို့ပါ။ ဆုံးခါနီးလေ ဈေးသက်သာလေပါ။
လူများရင် တောင်ပေါ်က Royal Project ထဲက Resort မှာ ညအိပ်ပါ။ လူ၅ယောက်ဆန့်တဲ့ တစ်အိမ်လုံးမှ ဘတ် 7500 လောက်သာရှိတာပါ။
Doi Inthanon တောင်ပေါ်ကဆင်းတဲ့နေ့မှာ တောင်ပေါ်မှာ မအိပ်ပါနဲ့။ ချင်းမိုင်ပြန်အိပ်ပါ။ ချင်းမိုင်မှာ လည်စရာတွေ အများကြီး ရှိလို့ပါ။ တောင်ပေါ်မှာက ညဘက်ဘာမှ လုပ်စရာမရှိပါဘူး။
အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ချင်းမိုင်အကြောင်းသိချင်တာတွေ ရှိရင်လည်း လှမ်းမေးနိုင်ပါတယ်။ သိသလောက်ဖြေပါ့မယ်။ ဒီ Post ကိုလည်း Share နိုင်ပါတယ်။ ပုံတွေထဲမှာလည်း ရှင်းပြထားပါသေးတယ်။
This entry was posted in Animals, Asia, Thailand, Uncategorized and tagged adventure, Asia, food, Nature, Thailand, Travel. Bookmark the permalink.
← Sleeping Beauty Fairy Tale Castle, Neuschwanstein